”Waar ninyohow garoomada iskaga bax waad gabowday e” – Basler oo Buffon beerka kala baxay! – Gool FM
”Waar ninyohow garoomada iskaga bax waad gabowday e” – Basler oo Buffon beerka kala baxay!
(Munich) 14 Feb 2018 – Laacibkii hore ee caalamiga ahaa ee reer Jarman jaalle Mario Basler ayaa weerar ku qaaday qawaarka Gianluigi Buffon – “Juventus Champions League isaga ku qaadi mayso”.
Laacibkan 40-jirka ah ayaa ku fashilmay inuu qabto laadkii xorta ahaa ee Christian Eriksen oo si fudud agtiisa u maray kulankii ay xalay Tottenham 2-2 kula noqdeen wareegga 16-ka ee Champions League, balse Basler oo la hadlayay TV Jarman ah ayaa aad u dhaliilay qabtaha Bianconeri.
“Gigi wuxuu ahaa goolwale aan caadi ahayn, balse mararka qaar waxaan seegnaa xilligii aan fariisan lahayn” ayuu yiri ku guulaystihii Euro ’96.
“Wuxuu ka ilduufay xilligii uu howlgebi lahaa, anigu waxaan kaga baxay 33, marka naadiga iyo macallinku [Max Allegri] waa inay u sheegaan in la gaarey xilligii u fariisan lahaa. Laga yaabee inuu doonayo Champions League, balse hadda kaddib ma aha goolwalihii heerka sare ahaa. Juventus isaga koobkaas kuma qaadi doonto.” ayuu raaciyay.
GOOGOOSKA: FC Porto vs Liverpool 0-5 (Ina Saalax oo weli sidiisii u socda)